Motorola Milestone oo si qoto dheer u eegay | Androidsis
Terminal ka mid ah Muhiimadda Motorola ayaa soo gaadhay gacmaheena mahadnaqa dukaan taleefanka gacanta oo bilaash ah Vipmobile halkaas oo aad ka heli karto gebi ahaanba bilaash iyada oo aan lala xiriirin shirkad taleefan.
Laga soo bilaabo terminaalkan, oo magiciisu yahay Mareykanka Motorola Droid, Waxaan kahadalnay dhowr jeer inkasta oo marwalba anaga oo aan runtii isku deyin. Terminal-ka ayaa ah midka kaliya ee hadda leh nooca ugu casriyeysan ee Nidaamka hawlgalka Android, 2.0 sidaas darteedna waa tan kaliya ee ciriirineysa fursadaha ay bixiso cusbooneysiinta Android.
El Muhiimadda Motorola bannaanka waxay leedahay dhammeystir sifiican loogu guuleystay oo bilic ahaan ma ahan wax fool xun in kasta oo laga hadlayo dhadhanka midkeenba midkayaga ayaa leh. Maaddada macdanta ah ee lagu sameeyo waxay ka dhigeysaa mid taabasho wacan leh waxayna taleefanka siisaa xoog badan.
In kasta oo qalabku leeyahay kumbuyuutar jireed oo ka hooseeya shaashadda, dhumucduna ma badna, waxay la mid tahay tan Sixirka Htc. Cabir ahaan ficil ahaan waxay lamid tahay Htc G1 in kastoo nasiib wanaag muuqaalka uusan aheyn.
Guji si aad u weyneyso
Miisaanka taleefanka inkasta oo qeexitaannada farsamo ay ka muuqato ka weyn tahay Htc G1Markaad gacantaada ku haysato waxay u muuqataa mid caksi ah. Culays haba yaraatee.
Android 2.0 Si dhakhso leh ayuu ugu shaqeeyaa taleefankan, laakiin si loo ogaado qaybta cilladdu ka taagan tahay taleefanka iyo qayb ka mid ah cilladda uu yahay nidaamka hawlgalka, waa inaan sugnaa sugitaanka nooca nidaamka oo si rasmi ah loogu rakibay terminal kale.
Waxaan sii wadaynaa faahfaahinta habdhaqanka Muhiimadda Motorola.
El Muhiimadda Motorola leeyahay a OMAP3430 ARM Cortex A8 processor oo xawaarehiisu yahay 550 Mhz, in haddii aan barbar dhigno kan Sixirka Htc tusaale ahaan waxaan aragnaa in xawaareheeda uu ka sarreeyo oo keliya 22 Mhz, ficil ahaan waa isku mid inkasta oo uu wato processor-ka kale.
Waxay leedahay xusuus RAM ah 256 Mb, halka Htc G1 iyo Htc Sixirka waxay leedahay oo keliya 192 Mb. Xusuusta Rom ee tan hore waa 512 Mb oo u dhiganta tan keenta Sixirka Htc.
Kiiboodhka jirka ee terminalku waa 4 saf oo ka duwan kan Htc G1 kaas oo leh 5 saf. Waa la duubay umana baahnid inaad cadaadis badan saarto si aad u isticmaasho. Furayaashu xoogaa wey yar yihiin cabirka in kastoo aad isticmaaleyso khalad kuma dhici doontid adigoo riixaya fure khaldan Waxay ku leedahay fure dhinaca midig ee isla jibbaarada oo ka weyn inta kale taas oo u shaqeysa sida loo taabto, inkasta oo aysan mid si sax ah u ahayn Waa furaha jihada leh dhaqdhaqaaqa kor, hoos, midig iyo bidix, taas oo naga caawinaysa inaan u dhaqaaqno tilmaame hareeraha shaashadda taleefanka. Shakhsiyan waxaan ugu badali lahaa taabashada.
Xusuusta kaydinta waa la ballaarin karaa iyada oo loo marayo booska kaararka micro SD ilaa awoodda 32 GB.
Batariga waa 1400 Mah oo na siinaya, sida ku cad qeexitaankiisa rasmiga ah, ismaamul dhan 390 daqiiqo oo lagu badalayo shabakadaha Gsm iyo 290 daqiiqo oo shabakadaha 3G ah. Waqtiga sugitaanku wuxuu kordhayaa ilaa 350 saacadood oo kuxiran shabakadaha Gsm iyo 380 saacadood oo shabakadaha 3G ah.
Terminalku wuxuu leeyahay xiriir USB micro ah in kasta oo uu leeyahay isku xiraha gaarka ah ee sumadda. Isku xirahan ayaa ah midka ka dib marka la saxiixo heshiiska calaamadaha ugu waaweyn ay noqon doonaan heerka Yurub laga soo bilaabo 2010. Waad ku mahadsan tahay cadeynta Robin.
Culeyskiisu waa 165 garaam, isagoo ah kan Htc G1 158 garaam iyo Sixirka Htc 118,5 garaam. In kasta oo sidaan horay u sheegay, aysan ahayn wax culus oo dhan, waa wax iska soo horjeedda.
Cabirkeedu waa 115,8x60x13,7 mm iyo inuu kaa siiyo fikrad ah Htc G1 waa 117,7 × 55,7 × 17,1 mm iyo kuwa Sixirka Htc 113x55x13,65 mm.
Ugu dambeyntii, oo ku dhowaad heerka noocaan ah, waxaad dhahdaa wuxuu leeyahay xawaare, dareeraha iftiinka daaqada iyo fiilada isku xirnaanta 3,5 mm.
Isku xirnaanta Muhiimadda Motorola sida terminal-dhamaadka sare oo ay u dhigantaa, waa la dhammaystiray. Waxaan had iyo jeer la xiriiri doonaa ama shabakadaha Wifi, GSM, GPRS ama HSDPA iyo Bluetooth
Waxay taageertaa shabakadaha Wifi nooca 802.11 b / g iyo nooca isku xirka Bluetooth waa 2.1 + EDR.
Isku xirka GPS wuxuu kujiraa marka lagu daro nooca A-GPS. Waqtiga ay qaadaneyso in xiriir la helo dayax gacmeedyada waa mid aad u gaaban oo ficil ahaan waa deg deg.
Waxay leedahay codsi lagu rakibay oo ay abuurtay Motorola wac Xariirka Telefoonka Motorola, taas oo aan horey uga soo hadalnay maalinteeda, oo aan kala soo bixi karno kumbuyuutarka kombuyuutarka adoo adeegsanaya Wifi, oo aan awood u yeelan karno sms, sawirro, fiidiyowyo iyo wicitaanno.
BARNAAMIJKA IYO MULTIMEDIA
Tani waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee taleefankan, wuxuu leeyahay a 3,7-inji WVGA-shaashad karti leh oo leh qaraar dhan 854 × 480 pixels oo leh 16 milyan oo midabo. Waa mid aad u fiiqan oo leh midab weyn oo midab leh.
Jawaabta keystrokes-ka ayaa kafiican tan boosteejooyinka ee aan awooday inaan ilaa hada tijaabiyo, sida G1, Magic ama Hero. Iyada oo cabbirka shaashadan la adeegsanayo kumbuyuutarka kumbuyuutarka ah waa wax aan macquul ahayn in la helo xarafka aan dooneyno midig. Intaa waxaa sii dheer, in loo isticmaalo GPS ahaan, cabirka shaashadan ayaa ka habboon kan caadiga ah ee 3,2 inji illaa hadda.
Qeybta hoose ee shaashadda waxaan ku haysannaa afarta fure ee caadiga ah Telefoonada Android sida guriga, dhabarka, liiska iyo raadinta. Iyagu ma ahan kuwa jirka ah laakiin waa furayaal taabasho leh jawaabtooduna waa ku filan tahay. Waxaan u xiisay trackball ama taabashada taabashada si aan u awoodo inaan u isticmaalo marka aan xirno kiiboodhka.
Waxay ku habboon tahay faylasha maqalka ee nooca AMR-NB / WB, MP3, PCM / WAV, AAC, AAC +, eAAC +, WMA, MIDI waxayna leedahay taageero faylasha fiidiyaha ah nooca MPEG-4, H.263, H.264 , WMV, OGG.
Waxay awood u leedahay inay soo duubto fiidiyow ilaa 30 wareeg ah ilbiriqsigii iyada oo lagu xallinayo 720 × 480 pixels. Tan awgeed waxay ku timaaddaa qalab kamarad leh 5 Mpx leh autofocus, double Led-Flash, 4x zoom iyo xasiliyaha sawirka. Tayada sawirradu aad ayey u wanaagsan tahay oo halkan waxaa ku yaal sawirro qaarkood oo lala qaaday Milestone iyo Htc G1 iyo Htc Magic.
Sawir lagu qaaday Motorola Milestone
Fiidiyowga waxaa laga qaaday Motorola Milestone
Aragtidayda aragtida ah Muhiimadda Motorola waa taleefan weyn, oo ku qalabaysan wax kasta oo terminal yeelan kara maanta. Tan waxaan ku darnaa in nidaamkaaga qalliinka uu yahay nooca ugu horumarsan ee Android kaas oo aan ku haysanno qalab aad u wanaagsan iyo softiweer aad u fiican sidaa darteed natiijada waa mid aad u wanaagsan.
Dilkii Android Waa dhakhso badan oo barnaamijyadu waxay u socdaan si dhakhso leh laakiin sidaan idhi, waxay noqon doontaa arrin la sugayo in lagu rakibo isla nidaamka taleefan kale si loo arko haddii taasi ay tahay khaladka terminal-ka ama nidaamka hawlgalka
Shaashadeeda ballaaran ayaa ah waxa ugu badan ee taagan, iyada oo ah jawaabteeda taabashada badan ee la hagaajiyay marka la barbar dhigo boosteejooyinka jira.
Waa taleefan weyn, laakiin leh shaashad 3,7-inji ah ma yaraan karto. Kuma haboona kuwa doonaya in aan la dareemin maxaa yeelay boosteejada ayaa taagan.
Iyada oo ah dhibic horumarineed, kubbadda cagta ee kor ku xusan ee lagu soo dari karo xagga hore ee marka la isticmaalayo taleefanka xidhan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Motorola » DIB U EEGISTA MOTOROLA MILESTONE OO Qoto Dheer
Haye, dib u eegis weyn. Waxaan ka fekerayaa inaan helo sixir / geesinimo, haddana waxaan ka shakisanahay tan sidoo kale, in kastoo aan u maleynayo inay aad iigu weyn tahay oo ii iftiimayaan.
By the way, meesha aad dhigto "La'aanta trackball a" waa la'aan "h", tan iyo markii ay ka timid falka "tuur" iyo "ha samayn".
Waa run Pepe waa h la'aan, mahadsanid. Sixirku xoogaa wuu ka gaaban yahay dhererkiisa, laakiin dhumucda iyo ballacuba waa isku mid. Hadaad awoodo, maanta ayaan dooran lahaa.
Waad salaaman tahay, waxaad fursad u leedahay inaad isbarbar dhigto, ma ii sheegi kartaa inta MB ee ay ku leedahay qaybta nidaamka ROM, marka la barbar dhigo sixirka iyo geesiga. Iyo fikirkaaga hadii waxa ku haray MB qaybinta la sheegay ay boos siinayso wixii cusboonaysiin ah ee mustaqbalka, MAHADSANIDIin
Duubista fiidiyowga waa D1 (720 × 480 pixels) @ 24fps oo aan xun laakiin aan gaarin 30 fps.
Ma aqaan in midkan la qabto ama la sugo X10-ka.
Dib u eegis wanaagsan.
Waad ku mahadsantahay cadeynta. Dhamaan wanaag
Waad salaaman tihiin. Waxay ila tahay koox dhammaystiran laakiin waxaan u xiisay laba arrimood:
1.- Shaashad AMOLED ah (tayadiisu sareyso oo isticmaalkeeda tamarteeduna hooseeyo)
2.- Sifeeyaha FM-ka (oo markaa xitaa wuu ka sii dhameystirnaan lahaa).
Waad ku mahadsantahay dib u eegista.
Ku jawaab Angelico
Miyaad horeba isku dayday suurtagalnimada adeegsiga khariidadaha khariidadaha google-ka ee ka baxsan Mareykanka sida lagu sharraxay horumariyeyaasha xda?
Runtu waxay tahay inay wax weyn u noqonayso mashiin horay u dhameystiray.
Haa, waxaa jira nooc ka mid ah khariidadaha google-ka ee internetka oo u oggolaanaya marin ka baxsan Mareykanka oo sidoo kale ka shaqeeya taariikhda. (waana waxa ugu horeeya ee aan qaban doono markaan helo taleefankayga isbuuca dambe)
Ma ogtahay haddii ay taageerto barnaamij kasta oo u oggolaanaya wax ka beddelka faylalka Xafiiska Milestone? Mahadsanid
Ma aqaano Xafiiska Degdegga ah: ma waxaa lagu daray barnaamijka 'Milestone software'? Ma bilaash baa mise waa la bixiyaa?
Haddii Milestone uu leeyahay kamarad hore, sidee buu wicitaanka fiidiyowga u shaqeeyaa? Ma heli karo sida loo sameeyo. Mahadsanid.
Ku jawaab Claus
15 maalmood ka hor waxaan iibsaday dhacdo motorola ah oo dhibaatooyin ayaa i soo maray, waxay ku kululaatay dhabarka dhererka kamaradda waana la cunay
labadii saac ee bateriga, waxaan geeyay xarun motorola rasmi ah waxayna igu yiraahdeen
in saxanku dhibaatooyin lahaa. Horayba waa loo dayactiri lahaa berri waa inaan raadsadaa si aan u soo helo .. Waxaan rajeynayaa inay si fiican u soo baxday
WAA SALAMO MILESTONE MAYA KU QAADAYO INTERNETKA MA GELI DOONO BOGGA MAHADSANID
Ku jawaab NIKA
Waad salaaman tihiin, moobaylkani ma leeyahay wicitaan fiidiyoow ah? maxaa yeelay ma heli karo ikhtiyaarka. Mahadsanid!!!
Sideen codadka mp3 ugu dhajiyaa farriimaha (sms)? Ma awoodoooooooo..fadlan xalka ..! Mahadsanid
Dhibaato isku mid ah ayaan qabaa how .Sidee baan mp3 ugu dhigayaa farriimaha
Ku jawaab ares
Ma lihid google?….
Kaarka SD-ka, waa inaad ka sameysataa galka ”warbaahinta”, buugan gudihiisa waxaad ku abuureysaa galka kale “maqalka”, gudaha codka waxaad ku abuureysaa galka “ringtones”, “digniinta” iyo “ogeysiisyada”
Way fududahay haddii aad soo dejiso siddooyinki dheeraadka ahaa, waad rakibtay ka dibna waxaad aadeysaa meesha had iyo jeer aad codka ka bedesho
Waxaad aadeysaa giraanyada la dheereeyay waxaadna u xulaysaa hees kasta oo mp3 ah sms, waxay igu darayaan wax walboo anigana si fiican ayaan u sharaxayaa!
Ku jawaab lucas monteros
Waxaan soo iibsaday taariikh muhiim ah mana garanayo inay caadi tahay iyo in kale, laakiin muusigga oo la garaaco saacad iyo badh saacadood ka dib ayaa la cunayaa baytariga markii aan dhinaciisa dhigo, shaashadda ma rogmato, marka laga reebo markaan furo kiiboodhka qwerty.
Qof ma ii sheegi karaa haddii taasi caadi tahay mise waa inaan wacaa adeegga farsamada?
marka hore… horeyba ma u cusbooneysiisay 2.1? noocani wuxuu hagaajiyaa dhibaatooyin badan
Marka labaad, muusiggu ma isticmaalo nolosha batteriga wax badan marka laga reebo haddii aad ku sameyso shaashadda.
Wareeji shaashadda: waxay kuxirantahay barnaamijka, ciyaariyahu waa inuu wareegaa laakiin «guriga» ma wareego (marka laga reebo inaad isticmaasho barta warbaahinta ee badan)
saamaxa… (marka laga reebo haddii aad isticmaasho qalabka wax lagu duubo ee loo yaqaan 'multimedia dock' AMA MARKII AAD FURTO FURSADDA)
robin: horeyba wuxuu ula yimid 2.1. Waxaan isticmaalaa muusikada shaashadda ka baxsan. Waxaan isku dayay codsiyo badan oo kaladuwan oo furan mana jiro wax wareegaya. 2 sahamiyayaal, youtube, muusig, aknotepad, mail ... iyo waxba haba yaraatee 🙁
wac adeegga farsamada?
Mid baan hayaa waxbana ma dhihi karo waxaan ka jeclahay mooyee, waxaan ka baqay inaan ka tago iPhone-kayga runtiina waan ku faraxsanahay tan marka loo eego tan kale, waxa kaliya ee aan u xiisay iPhone-ka ayaa ku jira dukaanka , in ay leeyihiin tomtom iyo codsiyada kale.
Waxaan kaliya rajaynayaa in suuqui tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah, laakiin aan hakad lahayn u noqdo wax la mid ah, hadii kale, aad ayaan u faraxsanahay
Waxaan jeclahay naqshadeynta oo ka badan tan nexus, iyo wax walba oo ka sarreeya, waxaan leeyahay yeelashada, ikhtiyaarka kumbuyuutarka jirka, markaan ku qoro emayl dheer ama qoraal, taasi waa waxa aan ugu adeegsado ku habboonaanta, in kasta oo leh mid waa mudan tahay…
Qofkii aan ka shakin, ma niyad jabi doono, ahhhh muuqaalka fiidiyowga ee ka socda microSD, bilaa boodbooyin, oo aniga igu dhici waayey HTC HD2, oo socdey 3 maalmood….
Jawaab Overon 37
WAXAAN HAYAA SU'AAL KU SAABSAN MOLOROLA MILESTONE.
Waxaan ka helay labo faallooyin dadkii aan ogahay inay haystaan ​​miliiliyuhu, waxayna ii sheegeen in baatirigaasi yahay mid maalin kayar.
Waxaan rabay in aan ogaado hadii arintani run tahay, iyo sida aan ugula xiriiro si aan u iibsado waxaan rabay in aan hubiyo in taleefanka wicitaanku runti uu fiicanyahay.
WAAN SUGAYAA JAWAABKAAGA WAAD KU MAHADSAN TAHAY IN AAD BADAN WAAD MAHADSAN TAHAY !!
Ku jawaab Lara
Waxaan rabaa inaan ogaado sida aan sameeyo si aan u arko oo aan u saxo faylasha Word iyo Excel, maxaa yeelay runtu waxay tahay ma heli karo wadada. Mahadsanid
Waad salaaman tihiin asxaabta qaaliga ah, waxaan shaki weyn ka qabaa terminalka aan doonayo inaan ogaado iyo shakiga jira ee aan qabo ayaa u dhexeeya:
Milestone, X10, X6, vivacious, Htc Rabitaan, Acer Liquid
Keebaad igula talinaysaa? Wax kasta oo aan akhriyay, waxay ila tahay aniga inkasta oo X10 uu sifooyin fiican ku leeyahay warqadda, kumbuyuutarka qwerty ee dhacdada ayaa shaki iga geliyay.
Jawaab ku sii Koyi Kabuto
vane25 !!! dijo
Salaan !! Waxaan ubaahanahay inaan ogaado sida aan sameeyo si codka fariimaha qoraalka uu ugujiro mp3 inaan doorto !! x Ilaahow .. korkiisa waxaan ku iibsaday si xamaasad leh waxayna ii soo baxday inaysan lahayn wicitaan fiidiyoow ah ... laakiin aakhirka wey fiicantahay !!!!!
Ku jawaab vane25 !!!
TELEFONKA AAD U Wanaagsan, waxaan cadeynayaa in kani yahay kii labaad, kii 1-aad ayaa loo badalay dammaanad qaadka, maxaa yeelay aad buu u kululaa oo wuxuu ku cunaa baytariga taabashada, waligood iima sheegin dhibaatada i haysata.
Waad salaaman tihiin, dhib yar ayaan ku qabaa dhibcaha yar yar ee miiqyada, markaan rabo inaan sawirro la galo kamarada si dhib yar ayaan u dhaqaajiyaa oo sawiraduna way kala xumaadaan ama way madoobaadaan, ma waxay dhibaato ku tahay kamarada ka socota warshada Mise waa lagama maarmaan in la soo degsado barnaamij ama wax la mid ah si ay iyagu u ekaadaan haddii aad i caawiso, aad baad u mahadsan tahay. . .
Ku jawaab luchim
Waan soo guuriyey faallooyinka isticmaalaha, maxaa yeelay isla waxbaa igu dhaca aniga, wuu aqriyaa feylasha laakiin tafatiri kari maayo !!!!
Waxaan rabaa in aan ogaado sida aan u arko una tafatiro faylasha Word iyo Excel, anigu garan maayo sida!
Mahad badan !!!!!!
ruben (buenos aires, argentina) dijo
waad salaaman tihiin, waan idiin soo qorayaa. si aan kuugu sheego qadiyadeyda iyo tan saaxiibo badan oo kuqatay guusha motorola.
In kasta oo taleefanku bilic ahaan qurux badan yahay oo dhammaystiran… ..waxay leedahay cilado aan la tirin karin. Waxaan cadeynayaa inaan cusbooneysiiyo ilaa 2.1 anigoo kula taliyay bixiyaha maxaa yeelay waxay ka timid warshadda oo leh nooca 2.0.
Guul darrooyinka: taleefanka kuma shaqeynayo wax kayar 20MB oo bilaash ah (aaladda xusuusta) tanina waxay keenaysaa dhibaatooyin markii aad booqanaysid shabakadda, maxaa yeelay sidaad u daalacato xusuusta gudaha ah ayaa iskeed isu buuxisa (iyadoon waxba soo dejineynin) illaa Barta taleefanka looga xirayo soo gelinta sms iyo kuwa kale waxay dhahayaan waxay heleysaa gaabis iyo nolol NOLOSHA, horay ayaan ugu badalay damaanad waxaana kooxda labaad ay soo bandhigtay isla dhibaatooyinkaas, dhibka tan ayaa ah in cidna aysan aqoon sida loo helo xalka si aad u tirtirto xogta xad dhaafka ah ee RAM-ka taleefanka marka laga reebo dib-u-dejin guud, taas oo muujinaysa luminta guud ee qaabeynta oo dhan oo ay fulisay mid. Dhinaca kale, labada kooxba khalad ayaa ku jira markay furayaan gacmo-la’aan ama dhagaha, maxaa yeelay marka la sameynayo, kaliya muusigga muusiga ayaa kiciya mana istaagayo si kasta oo aad isugu daydo inaad u joojiso, maxaa yeelay markaad soo gasho ciyaaryahanka la yiraahdo waa "la hakiyay" markaa waa inaad sugtaa ku dhowaad. qiyaastii 45sec. isna wuu istaagayaa kaligiis. Sidoo kale tan, guuldarrooyin badan ayaa jira, laakiin tan ugu daran ayaa ah fashilka wananka oo buuxsamaya saacad iyo badh ka daalacashada webka. Runtii anigu waxaan ka mid ahay dad badan oo dareemay Niyad jab kooxdan ah oo qaybna khiyaameeyay qiimaha la bixiyey.
laga bilaabo hadda waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado sida xusuustani u noolaan doonto iyadoo aan loo baahnayn dib-u-dejin guud,
Ku jawaab ruben (buenos aires, argentina)
Haye! Waxaan hayaa talefankan gacanta dhowaan !! laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado sidaan u abaabuli karo sawirada !! maxaa yeelay dhammaantood waa la isku qasan yahay, ma abuuri kartaa faylal aad abaabulto?
Ku jawaab ARNALDO
Aniga ahaan marxaladuhu waa timo, kaliya ma isticmaali karo kamarada hore
marxaladuhu malaha walaal camal hore
Dadyahow waad salaaman tihiin, waxaan soo iibsaday taariikh muhiim ah, waa raaxo, waxaan iibsaday dhabarka hore marka hore, laakiin waxaa ii soo baxday in tayada duubista ay tahay wax laga yaqyaqsoodo, sidaa darteed waxaan uga cawday shaqaalaha (maxaa yeelay waxaan u qaatay inaan ku bixiyo qaansheegad) ) eh waxaan sameeyay Soo celinta qalabka, oo waxaan helay tilaabada, runtu waa 10 + VAT. kuwa dhibaatada ka haysata qalabkooda, oo waxay u soo bixi kartaa uun kii aad iibsatay oo fashilmay. Ma degdego kooxda, xusuusnow inay taleefoon tahay, kumbuyuutar ma ahan, waxaa jira kuwa doonaya inay kunka dhaafaan, aniga dhankeyga waxaan ahay cunti waxaanan u qabtaa si deggan. salaan dhamaan
Kajawaab soo bixinta
Wanaagsan waxaan leeyahay talaabada laakiin markii aan aado liiska ma helayo astaanta xafiiska waxayna oraneysaa in lagu rakibay sida aan sameeyo si astaanta ay u muuqato waxaan ubaahanahay caawimaad fadlan
Mahadsanid, waxaan rajeynayaa jawaabahaaga.
Waad salaaman tahay, waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii ay caadi tahay in lagaa qaado batteriga maalin kasta haddii aad aragto iyadoo la adeegsanayo
Waad salaaman tahay, waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii ay caadi tahay in la buuxiyo batteriga maalin kasta haddii aad aragto iyadoo si badan loo adeegsanayo. Waxaan leeyahay guul muhiim ah
Waad salaaman tihiin, motorola-kani waa mid weyn, dabcan waxaan baranayaa sida loo isticmaalo, waxa aanan sameyn karin ayaa ah in xafiiska laga helo adeegsiga heer sare iyo kuwa kale, sideen ku sameeyaa? I caawi
yaa i caawiya ... Waxaan ka helay wax la mid ah kamarad hore taariikhdeyda, maxaa waaye?
Jawaab jose dario
Luis buuxa dijo
Waxaan leeyahay motorola androi waxaan rabaa inaan ogaado. Haddii aad haysatid kamarad hore iyo sida aad u isticmaasho. Myroi waa cdma. Motorola google 5mp fadlan ii sheeg sida. Kaamirada hore way shaqaysaa Waxaan jeclahay inaan isticmaalo oovoo
Jawaab si Luis Llenas
Cadaadiska 1190 dijo
Haye, halkee baan ka iibsadaa midkood? Waan ku weydiiyay waxayna igu yiraahdeen ma jiro kuwa halkan jooga, wali ma aysan soo gelin tusaalahaas.
Jawaab ku saabsan Evymrm 1190
Sideen ugu shaqeeyaa kaamerada hore Milestone 3 ????????????????? Nolosha batteriga iyo heerkulka taleefanka gacantayda waan iska casilay, laakiin kamaradda hore ayaa faa'iido badan yeelan lahayd! Waad mahadsantahay ilaa hada !!!
Ku jawaab Dámaris
ULTIMATEFAVES, ANDROID DESKTOP IN 3D CAROUSEL